COI: nahomby ny fiarovana ny tontolo iainana | NewsMada
COI: nahomby ny fiarovana ny tontolo iainana
Tanjon’ny fandaharanasa miompana amin’ny tontolo iainana, tohanan’ny Vondrona eoropeanina amin’ny vola (UE), ary tanterahin’ny Vaomieran’ny ranomasimbe Indianina (COI), ny hampihenana ny tsindry manimba ny tontolo mananaina, ny fitantanana ny harena voajanahary hitondra fampandrosoana hiadiana amin’ny fahantrana.
Nanomboka ny taona 2014 ny Fandaharanasa hikajiana ny tontolo mananaina aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Voakasik’izany ny firenena ao anatin’ny Vaomieran’ny ranomasimbe Indianina (COI), miisa efatra (Madagasikara, Maorisy, Kaomoro, Seychelles), miampy firenena roa aty Afrika (Kenya, Tanzania). Namatsy vola ny fandaharanasa ny Vondrona eoropeanina, ao anatin’ny Fed andiany faha-10, hifarana amin’ny janoary 2019.
Nambaran’ny tompon’andraikitry ny fandaharanasa ho an’i Madagasikara, Rabenandrianina Rivosoa, fa miisa efatra ny vokatra andrasana. Voalohany, ny fanatsarana ny lafiny lalàna sy ny fepetra mikasika ny tontolo mananaina. Tafiditra ao anatin’izany ny fametrahana ny Dina, ifampifehezan’ny mponina eny ifotony.
Nihena ny harena voajanahary
Faharoa, ny famindram-pitantanana amin’ny Vondrona olona ifotony (VOI). Azo raisina ohatra ny any amin’ny manodidina an’i Nosy Be. Nihena ny vokatry ny fambolena satria mitombo ny isan’ny mponina, nihena koa ny harena voajanahary satria nitombo ny fandripahana ny hazo toy ny any amin’ny ala honko, ohatra. Nihena koa ny tahiry entona karbôna (CO2 ) avy amin’ny tahirin’ala.
Fahatelo, ny fampifandraisana ny mpisehatra samihafa amin’ny alalan’ny fananganana tambajotra. Singanina amin’izany, ny tambajotra ho an’ny fiarovana ny akorandriaka any anaty ranomasina izay mihafotsy satria maty ny zavamaniry sy ny bibikely vokatry ny fiakaran’ny maripana eto an-tany.
Fanohanana ny velon-tena
Fahefatra, ny fanohanana ny seha-pikarohana sy ny foibe misahana ny zavaboahary, toy ny parka Tsimbazaza, ny Fofifa, ny Sampampianarana siansa eny Ankatso, sns.
Vokatra fanindiminy nanampiana ireo voalaza ireo ny fanohanana ny tetikasa mitondra fampandrosoana maharitra, manatsara ny fari-piainan’ny mponina. Nilaza Randriamampionona José, solontenan’ny fikambanana Sahy, miara-miasa amin’ny Sofia guide touristique (SGT) any amin’ny faritra Sofia, fa anisan’ny velon-tena vaovao nosokafana ho an’ny mponina any amin’ny distrika Analalava, ao anatin’ny kaominina Analalava sy Ambolombozo, ny fiompiana tantely, ny rary, ny fizahantany, ny fambolen-kazo any amin’ny ala honko, ny famerana ny fotoam-panjonoana, sns. Samy nahatsapa ny fiovana sy ny vokatra azo tsapain-tanana ny mponina any an-toerana.